जवान छोरीलाई आमाले सिकाउनुपर्ने ४ कुरा - नेपालबहस
जवान छोरीलाई आमाले सिकाउनुपर्ने ४ कुरा
| १५:३३:३५ मा प्रकाशित
११ भदौ, काठमाडौं । आमाले नै छोरिका दुःख सुख नजिकबाट बुझ्न सक्छिन्। आमाले नै आफ्नो छोरिलाई असल र खराव कामका बारेमा जानकारी दिन्छिन्। त्यसैले किशोरावस्थाका अर्थात जवान छोरीलाई हरेक आमाले ख्याल गर्नैपर्छ । जवान छोरीलाई सिकाउदा के के कुरामा ध्यान दिने त ?
१. सक्षम, सफल र सम्भावनायुक्त बनाउने
तपाइको छोरीको जिन्दगी अहिलेसम्म आरामसँग बित्यो र त्यहाँसम्म तपाइले पनि राम्रो साथ दिनु भयो। तर, स्कुलपछि कलेज जीवनमा छोरीको विषेश ख्याल गर्नुपर्छ। प्रत्यक समय छोरीको साथमा रहन नसकिने भएकाले पनि यस्तो समयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ।
त्यसैले किशोरावस्थाका छोरीलाई जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सावधानीपूर्वक सामना गर्ने गरि तयार पार्नुपर्छ। त्यही खालको शिक्षा दिनुपर्छ। कलेजको सुरुआति दिनमा छपाइको छोरीलाई कुनै कुराको समस्या हुन सक्छ। यस्तो बेला उनी जिम्मेवार बन्न जरुरी हुन्छ। किनकी उनी यस्तो समस्याबाट सहजै बाहिर निस्किन सकुन्। यसमा आमाले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।
२. साथी जसले जीवन बनाओस
कलेज जीवनमा सबैलाई राम्रो साथीको आवश्यकता हुन्छ। साथी विनाको कलेज जीवन अधुरो जस्तै बन्छ। तपाई पनि आफ्नो छोरीको कलेज जीवन तनाव मुक्त होस् भन्ने चाहनु हुन्छ भने आफ्नो छोरीलाई राम्रो साथी चयन गर्न सुझाउनु पर्छ। उनलाई जीवनमा राम्रो साथीको खाचो निकै हुने कुराबारे राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्छ। आफूलाई कुनै कुराको असर नहुने र अधिकांश भावना मिल्ने साथीको चयन गरियो भने कहिले पनि मित्रतामा खटनपटन आउँदैन।
३. असफलता नै सफलताको बाटो
आफ्नो बच्चालाई सधै नयाँ–नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ भनेर प्रेरित गरिरहनु पर्छ। आफ्नो जीवनका प्रेरक अनुभव साट्दै नयाँ कुराहरू सिक्न प्रेरित गर्ने। यसरी अगाडि बढिरहदा कुनै कुरामा असफलता हात लागे त्यो बर्बादी होइन भन्ने बुझाउने। कुनै कामको प्रयास गर्ने मान्छे नै सफल र असफल हुने हो। सधै सबै कुरामा सफलता हात लाग्दैन। निरन्तरको प्रयासपछि मात्रै कुनै कुरामा सफलता हात पार्न सकिन्छ भनेर सधै किशोरावस्थाकी छोरीको मनोबल पढाउनुपर्छ।
४. माया, प्रेम र धोका
कलेज टाइममा जो कोहीको साथीहरूसँगको दूरी नजिक टाढा हुने गर्छ। यस्तो बेला आफ्नो छोरीलाई जीवनमा कोही आउँदा वा जाँदा कुनै फरक पर्दैन भन्ने बारे सजग गराउनु पर्छ। खासगरी नयाँ पुस्ता चुर्लुम्म डुब्ने भएकाले माया, प्रेम र धोकाबाट सतर्क रहनुपर्ने कुरा सिकाउन बिर्सिनु हुदैन । किनकी कसैले कसैलाई जीवनमा विशेष रुपमा लिँदा उसँगको दूरी बढ्यो भने समस्या पैदा हुन सक्छ।
आमा कहाँ खोजुमा बाल कलाकार नेरेश्का स्थापित २ महिना पहिले
म्युजिकल फिल्म ‘आमा कहाँ खोजुँ ?’ को ट्रेलर सार्वजनिक २ महिना पहिले
छोरा गुमाएकी आमाको पीडा २ महिना पहिले
नगद पुरस्कारसहित ९० जना आमा सम्मानित २ महिना पहिले
चलचित्र ‘आमा’ युट्युबमा रिलिज ३ महिना पहिले
नेप्सेमा ४ कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत, कुनको कति ? ५ दिन पहिले
सगरमाथा आरोहणको पहिलो अनुमति दुई आरोही समूहलाई ४ हप्ता पहिले
पार्टी नेतृत्वको कारण समस्या यथावत: नेपाल २ हप्ता पहिले
सोमालियामा बाढीका कारण २९ को मृत्यु १० लाख प्रभावित ११ महिना पहिले
बागलुङमा सुकुर्दुङ खोलाको बाढीले बस्ती बगायो, १२ जना सम्पर्क बिहिन ८ महिना पहिले
दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा त्रिपक्षीय सुरक्षा वार्ता शुरु २ वर्ष पहिले
संसद विघटनले जटिलता निम्त्यायो, अब ताजा जनादेश : थापा २ महिना पहिले